မပါဘဲဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ - ဗီဒီယိုချက်တင်-အကောင်းဆုံး!
ချက်တင်ကစားတဲ့မိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောရှာဖွေ။ အဆက်မပြတ်ရှာနေတစ်စုံတစ်ယောက်သည်အ၊စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းနှင့် despairing။ အများအပြားမိန်းကလေးငယ်များကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားမဟုတ်တစ်ဦးသစ္စာနဲ့ကျိန်အပ်သောမိတ်ဆွေ၊ဒါပေမယ့်တစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်ဖြေရှင်းနိုင်သောသင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများ။ အွန်လိုင်းပေးပို့၏မိန်းကလေးများအနိုင်ပေးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ရိုးသားဆက်သွယ်ရေး။ လူအများတို့သည်ပင်မသိရပါဘူးဘယ်လိုဆွဲဆောင်မှုကြောင့်ကိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ။ ဤအရင်းအမြစ်များခွင့်ပြုမှရှောင်ရှားရန်အထီးကျန်။ သင်အောင်ညဦးနှင့်ရှိသည်ပျော်စရာတစ်ပျော်စရာလမ်းအတွက်ကြောင့်လုပ်ပုံကိုရှင်တို့သိလူတို့ကိုမည်သည့်လူသား။ သင်တွေ့လိမ့်မည်ဤအပျော်အပါးနှင့်ဖျော်ဖြေရေးမည်မဟုတ်ကြောင်းထားခဲ့အိမ္နဲအဆိုပါအားကောင်းလိင်၏ကိုယ်စားလှယ်။ စကားပြောနှင့်အတူအမျိုးသမီးများအတွက်အွန်လိုင်းအခမဲ့၊အများဆုံးတွေ့လိမ့်မည်အားလုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်နှင့်အရသာ၏ဦးစားပေးလူကြီးလူကောင်း။ ကားေတြအဆင်သင့်အဘို့အလွန်အပှငျ့ပှစကားပြောဆိုချက်၊နှင့်အတူ၏အကူအညီ သင်လွတ်မြောက်ရန်နိုင်မှႏပြင်ပကမ္ဘာ၏။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာ၊မေ့လျော့ကြောင်းအဘယ်အရာခဲ့သူတို့ကိုနှောက်အယှက်၊အစားအပေါ်အလေးပေး။ နှင့်အရေးအပါဆုံးအရာစကားပြောခန်းနှင့်အတူမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အချိန်အများကြီးကိုကယ်တင်နှင့်ငွေ။ လူဖို့မလိုအပ်ပါဘူးအစဉ်မပြတ်အဘို့အကြည့်အသစ်အသိအကျွမ်း၊လက်ခံသံသယအစည်းအဝေးဖြစ်ကြောင်းအတူအလေးအနက်အကျိုးဆက်များ။ အခုတော့၊ကိုယ့်နှင့်အတူအနည်းငယ် keystrokes၊ကမ္ဘာတစ်ခု၏မှော်အတတ်၊စိတ်အားထက်သန်နှင့်လက်နက်ဆက်သွယ်ရေးလာသည္။ သင်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များဖိတ်ခေါ်လူအပေါင်းတို့သည်ရောက်ရန်။ ရွေးချယ်လှသင့်ရဲ့အကြိုက်ကိုအသစ်ဖြစ်စေလျက်၊သာယာသောအသိအကျွမ်းနှင့်သုံးစွဲဖျော်ဖြေညနေခင်း။ ကုမ္ပဏီအတွက်အလွတ်လူ၊အဘယ်သူသင်ယုံကြည်၊သင်ခံစားရသောလွတ်လပ်မှု၏အရှုပ်ထွေးဖြစ်လာတစ်ဦးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသော။ ကျနော်တို့ဖို့သင်ကြိုဆိုပါတယ်။ ရပ်တန့်လျှင်သင်အားဖြင့်၊သင်အများဆုံးဖွယ်ရှိရှာဖွေနေများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့အသိအကျွမ်းနှင့်သာယာသော interlocutors။ လိုကိုအင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေး၏၊တွေ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်ပဲပျော်စရာရှိသည်သာေဒါက္တာဂ်ိဳးချက်တင်။ ကျနော်တို့ကိုပူဇော်ဧည့်ရွေးချယ်စရာအများအပြားချက်တင်။ အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူရှိ၊ရှိသမျှဧည့်တွေ့လိမ့်မည်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့စကားပြောဆို။ တစ်ဦးကိုရွေးချယ်အကြံပြုလမ်းညွှန်:ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူကျား၏အ interlocutor တြင္လည္းခြားပါရာမီတာ၊ကစားတဲ့အကြောင်းကိုလျှောက်ချိတ်ဆက်သင်နှင့်အတူမည်သည့်လူအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ချက်တင်သို့မဟုတ်စပ်ကစားတဲ့အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးစကားပြောနှင့်အတူ ၁၈ မိန်းကလေးများနှင့်အတူစတော်ဘယ်ရီ။ ပရိသတ်၏အပူအသွင်ရုံလေးမြတ်တန်ဖိုးဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူလှပသော၊လျှော့ပေါ့ရန်အဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေဆှ။ အားလုံးအပေါ်တစ်ဆိုဒ်ဖြစ်တစ်မူထူးခြားတဲ့အခွင့်အတွေ့အကြုံနှိုင်းလို့မရနိုင်တဲ့ခံစားချက်များကိုနှင့်စိတ်ခံစားမှုအတိုင်းအချိန်။ ဒါကြောင့်မှတ်သားထိုက်သည်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအမည်မသိစကားပြော။ အဘယ်သူမျှမအသုံးပြုသူအချက်အလက်များရနိုင်အကြောင်းကိုသင်၏တည်နေရာသို့မဟုတ်အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်။ တစ်ခုမှာအဓိကအားသာချက်အသက်ရှင်သောချက်တင်ကအခမဲ့ပါဘဲ။ ကျွန်တော်အလွန်ကြီးစွာသောအာရုံစိုက်၊ဆက်သွယ်ရေး၏ယဉ်ကျေးမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်၊ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမတိနှင့်ညစ်ပတ်ဝေနိုင်လု၏အတွေ့အကြုံ။ စိတ္အေျ။ အားလုံးဆက်သွယ်ရေးရာအရပ်ကိုကြာသာဘောင်အတွင်းအကြောင်းလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ Chatroulette အွန်လိုင်းကိုပေးမည်သင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း၏။ ဗီဒီယိုစကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူအခမဲ့အဘို့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲလေးလေးနက်နက်၊ဖျော်ဖြေရေး-အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့။ သာနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုသင်တို့အပေါ်ရေတွက်နိုင်၊အတူအိတ်ဖွင့်ဆက်သွယ်ရေးမိန်းကလေးများထံမှကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများ။ အကောင်းဆုံးအရာသင်အဘို့ပြုမှအဝတ်အစားချွတ်သင့်ရဲ့ကျောပိုးအိတ်။ ဒါကတကယ့်အတွင်းအစွန်အဖျားများအတွက်ယောက်ျားတွေကြိုက်သူအဆင်းလှသောအမျိုးသမီးနှင့်စပ်စကားပြောဆိုချက်။ အရွယ်ရောက်ပြီးချက်တင်တက်ဖွင့်လှစ်ခွင့်အလမ်းများအတွက်လက်တွေ့စကားပြော။ အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာလက်တွေ့။ ငါ့အားပြောပြရန်ဟူသောအချက်ကိုအတွက်အမှန်တကယ်အသက်တာမှမဖြစ်နိုင်သလောက်ကတွေ့ဆုံရန်သောသူမိန်းကလေးတစ်ဦးပထမဦးဆုံးမိနစ်များချိန်းတွေ့ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲပြောပြဖို့သင်တို့အပေါ်မှာန့်အရာအသစ်များနှင့်အကျက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏။ ဆိုဒ်တစ်ခုနှင့်အတူမိန်းကလေးများသင်ရုံတွေ့ဆုံဆွဲဆောင်၊ထိုကဲ့သို့သောအပေါင်းအဘော်။ ပထမဦးဆုံးအသွင်ချိန်းတွေ့တေွအများကြီးပိုမြန်ပြီးပိုလွယ်မှတကယ့်ကမ္ဘာပါ။ ငါတို့သည်စုဝေးသောသူမိန်းကလေးများအဘို့မွတ်သိပ်အာရုံစိုက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူ။ ဒုတိယအ၊ဗီဒီယိုစကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူပါဝင်ပါဘူးအျပိုးပန်းသီး၊ပန်းပွင့်နှင့်လက်ဆောင်။ သင်ချက်ချင်းစတင်ရန်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦး၊မှာ၊မေးခွန်းများမေး၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြောင်းပြောဆိုနှင့်ပင်အခွင့်အသေးစားလက်တွေ့ကျတဲ့ပြက်ရှိ၊သင်ထိုသို့ပေးရွေးကြပြီ။ ကျနော်တို့အလှဆုံးနှင့်ပူပြင်း။ နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ၊ကျွန်တော်တို့အမြင်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏၊သွင်။ ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ ခွင့်ပြုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သင်၏ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အတူအမျိုးသမီး၊အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ၏ရှုထောင့်အမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ပညာဖြစ်ပါသည်၊အရာသေချာပေါက်စဉ်းစားသုံးဝင်စစ်မှန်သောအသက်တာ၌။ လမ်းဖြင့်၊သင်မရွေးသေး၊သင်အနေနဲ့ဒီကိစ်စနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောစကားပြောဖော်။ အတွက်အချို့၏စီမံကိန်းများပေးအပ်၊သင်မှန်မှန်ဖန်တီးမိတ်ဆွေစာရင်းနှင့်စကားပြောနှင့်အတူမိန်းကလေးများသင်ဆွဲဆောင်ဖို့သင်၏အာရုံစိုက်။ သွင်ဆက်သွယ်ရေးပင်၊ဖရန့်၊မတူတစ်ဦးသစ္စာဖောက်။ ၁၈ အပေါင်းစိတ်နိုးအတွက်သင်မှကြွလာသောအသစ်အစွမ်းအဘို့အသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်။ ကစားတဲ့စကားပြောမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ ၁v၁ အနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအွန်လိုင်းချက်တင်နိုင်သည့်နေရာ ရွေးချယ်တဲ့မိန်းကလေးတိုင်းအရသာသည်၊နှင့်ထိုမိန်းကလေးမှပုဂ္ဂလိကစကားပြော။ လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံအမြဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတွေ့အကြုံ။ အသီးအသီးအချိန်သွင်ရင်းနှီးနဲ့နောက်ထပ်ပူအလှအမည်အသစ်အောင်ပွဲအဘို့သင့်အရင်းနှီးသက်ပြီးအားငါပေးမည်၊တောက်ပသော၊မမေ့နိုင်သောခံစားချက်များ။ မည်မျှအဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်ရွေးချယ်ချက်တင်ကစားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ-ဒါဟာစုဆောင်းမှု၏အံ့သြဖွယ်သောသူမိန်းကလေးများအမြဲမတူညီတဲ့ဖြစ်ပေါ်မူတည်ပြီးသင့်ရဲ့ဆန္ဒကို။
အခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ကမ္ဘာအဝှမ်းဆောင်အတူတကွအများအပြားမှလူအမျိုးမျိုးအစိတ်အဘယ်သူသည်လောကလာကြ၊ဒီမှာရှာဖွေချစ်ခြင်းမေတ္တာဖို့၊ထုတ်ဖော်ပြောဆို၊မျှဝေသူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်ဆည်းပူး၊အသစ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အရည်အချင်း၊အများကြီးပို။ ဝါသနာအနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအတွေ့အကြုံအတွက်အသက်ဝိညာဉ်၊အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်ရဖို့ဝေးကနေနေ့စဉ်အသက်တာနှင့်နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နှင့်အတူသင်၏အသက်တာဖြည့်စွက်တယောက်အနက်အဓိပ္ပာယ်။ အလွန်ကြီးစွာသောလမ်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အမှန်တကယ်၊အရာကူညီပေးသည်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်သင့်ရဲ့အရည်အချင်း၊စိန်ခေါ်မှုနှင့်စိန်ခေါ်မှုအလုပ်၏အသက်တာအများကြီးချမ်းသာနှင့်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့။ ဒါဟာမကြာခဏဖြစ်ပျက်ကြောင်းစိတ်အားထက်သန်နိုင်သည်နောက်ဆုံးမှာဖွင့်အရေးယူသို့အတွက်သင့်အသက်တာနှင့်ပုံမှန်ဝင်ငွေ။ သင်ခံစားရလျှင်သင်ကြိုက်ချင်မှမာစတာအသစ်ဝါသနာနှင့်ပိုကောင်းကြောင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်နားလည်ကောင်းဆုံးအသင်တို့အဘို့အ ယခုလေ့လာမှုဘာသာရပ်အကြောင်းအကျိုး။ သွား၏ရှာဖွေရေးအတွက်အသစ်နဲ့တူ-စိတ်တူသူငယ်ချင်းများအတွက်ကမ္ဘာတဝှမ်းအခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်။ ဒီလိမ့်မည်မသာအကူအညီနဲ့သင်ပိုကောင်းနားလည်သင့်ရဲ့အသစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ဦးကြိုပြုခြင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကြောင့်လူနှင့်အဆက်အသွယ်ရ၊ဒါပေမယ့်လည်းနှုတ်ဆက်ဖို့ပျင်းနှင့်အထီးကျန်မြဲပါ။ သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အကြောင်းပြောဆို၊ဆွေးနွေးချင်းစီခြေလှမ်းနှင့်အတူအသစ်ရဲ့မိတ်ဆွေအတွက်အခမဲ့အွန်လိုင်းကစားတဲ့အတွက်စကားပြောခန်းကမ္ဘာအဝှမ်းသင်တိုးတက်ရန်နိုင်လိမ့်မည်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်မှုများ၊အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေပြီးအတုအသစ်စိတ်ကူးများ။ တချိန်တည်းမှာ၊သင့်ရဲ့ဝါသနာဆောင်ခဲ့မည်အပြုသဘောစိတ်ခံစားမှုနှင့်အပျော်အပါးကိုသာသင်ဖို့။ အမှုများစွာအတွက်၊သင်၌ပါဝင်နေကြသည် needlework၊ဖန်တီး၊အလုပ်အရာတစ်ခုခုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်၊အနာဂတ်၌ဤအသီးကိုသီးလိမ့်မည်ချမ်းသာတဲ့သူကိုလူတိုင်းဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ဦးကဓာတ်ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်စာအုပ်ရေးသားခြင်းအားဖြင့်သင်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာအဖြစ်အားလုံးသည်ပရိသတ်၏ခွက်နှစ်မျိုးလုံးအတွက်အခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ နဲ့တကယ့်ကမ္ဘာပါ။ သင်ကြိုက်လျှင်သင်ဖန်တီးရန်တစ်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်၊အလုပ်ကလေးကစားစရာသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုး၏အခြားအမှုအရာ။ လက်ဝတ်ရတနာ၊သင်သည်သင်၏ဝါသနာအကျိုးရှိမည်မဟုတ်သာ၊ဒါပေမယ့်လည်းလူသူအကြာတွင်ရယူပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ၏သင်၏အလုပ်။ အခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ကမ္ဘာအနှံ့၊သငျသညျကျိန်းသေရှာတွေ့ကိုမျှဝေသောသူတို့၏အမြင်နှင့်အကျိုးစီးပွား၊သူမရှိဘဲဘဝကိုမြင်ယောင်ကြည့်မရနိုငျသင်တို့၏ဝါသနာနှင့်အမြဲတမ်းမျှဝေဖို့ပျော်ရွှင်င်းတို့၏အတွေ့ကြုံနှင့်အတူ။ ၏သင်တန်းတွင်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Chatroulette မှတဆင့်စကားပြော၊ကင်မရာနဲ့သင်သိမှရလိမ့်မယ်သီးအသီးအခြားကောင်း၊ထိုသို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင်ထပ်သင်ဘုံဝါသနာ၊သင်စေပါလိမ့်မယ်အရှိဆုံးသောစကားနှင့်သင်တို့၏ခင်မင်လှည့်ပါလိမ့်မယ်သို့ပူနွေးမင်ရင်းနှီး။ ဆိုရင်ရပြီမဟုတ်သေးဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်အဘယ်အရာကိုသင်လိုလုပ်ဖို့အတွက်သင့်ရဲ့အခမဲ့အချိန်၊အသစ် interlocutor အတွက်ရုရှားသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားအခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်၊သင်သည်အဘယ်အရာကိုစွဲရန်၊အဘယျသို့သင်ရှိသည်၊သင်မည်သို့သုံးစွဲသင့်ရဲ့အခမဲ့အချိန်၊အလုပ်အကိုင်အဘို့အပိုပြီးသင့်လျော်သောတစ်ဦးတယောအသက်အရွယ်။ လေ့လာဆန်းစစ်ပြီးနောက်အသီးအသီးအမြင်၊အတိအကျရွေးချယ်ဝါသနာသောအတတ်သင်အမြင့်ဆုံးကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုး။ ကျေနပ်မှု၊ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အပြုသဘောဆောင်သော။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားခန့်သာအခါအချို့သောနိုင်ငံကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဒီကနေတဆင့်ပြုသောအမှုခံရ-နူးထိပ်မှာတည်ရှိ၏။ အပေါ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်နိုင်ငံအားလုံး၊တစ်နိုင်ငံအဖြစ်တောင်အာဖရိကအမိန့်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအမည်:ဖြစ်ပါတယ်၊သင်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်၊ထို့နောက်အောက်မှာစာတစ်စောင်တွေ့လိမ့်မည်လိုအပ်ပါတယ်သောတစ်ခုဖြစ်သည်၊တူဟန္ေလျှင်၊ဂျပန်၊ဂျပန်၊စသည်တို့ကို။၊ ထိုအခါလူအားဆက်သွယ်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုအရာဖြစ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလက်တွေ့ဘဝ။ နှင့်ချက်တင်ကစားတဲ့ ၂၄ နာရီသင်မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်အခြားဗီဒီယိုချက်တင် ၂၄ ခေါင်းစဉ်သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးကိရိယာမှာရည်ရွယ်ဒီအဖြစ်မှန်။ ဆိုကြကုန်အံ့ပိုပြီးအကြောင်းမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံ။
မိသားစုအမြို့မြို့ပေါ်တယ်ကမ်းလှမ်းဒေသခံများ၏မှတ်ပုံတင်ရန်သူတို့၏ပရိုဖိုင်တွင်ချိန်းတွေ့အပိုင်း။ ဦးကြိုပြုခြင်းစိတ်ဝင်စားဖို့လူတွေအတွက်မြို့အဘို့ရှာသောသူကိုချစ်နှင့်အမျိုးသားချင်းဝိညာဉ်။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင် ၁၈ အသက်အနှစ်သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေ၊သင်ရှာလိုသူငယ်ချင်းများနှင့်ချစ်-ကွိုဆိုအချိန်းတွေ့ဖို့အတွက်။ အဲလစ်၊သင်လုံးဝတွန်းလှန်။ အမြဲတမ်းနေထိုင်အတူပျော်ရွှင်စရာနှင့်ချို။ မော်အပေါ်ပရိုဖိုင်၏အသုံးပြုသူ Olga။ မင်္ဂလာပါ။ သင်အလွန်ကြီးစွာသောကြည့်ရှု။ ကဗျာကောင်းပါတယ်။ ကျစ်လျစ်လျစ်နဲ့အပြည့်အဝအနက်အဓိပ္ပာယ်။ ကံကောင်းပါစေ။ မော်ပေါ် Olga ရဲ့အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်။ တစ္ေန့။ ဤသည်လျှင်သင်သည်သင်၏ဓာတ်ပုံ။ ငါမြင်ချင်ပါတယ်သငျသညျလုံးဝအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့။ မော်အပေါ်အသုံးပြုသူပရိုဖိုင် Ademic သုံးပစ္စည်းဖြစ်နိုင်မှသာလျှင်တက်ကြွစွာချိတ်ဆက်အပေါ်မြို့ပေါ်တယ်မြို့မိသားစုများ၏။
မင်္ဂလာပါ။ သင်မှန်ပါတယ်အဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနှင့်တိတ်ဆိတ်သောအချိန်။ ထည့်သူ၏မြို့ရိုးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြအနည်းငယ်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်:သင်ဘယ်သူ၊ဘယ်မှာ၊နှင့်အဘယ်သူသည်သင်တို့အဘို့အရှာနေဖြစ်ကြောင်း။ ထိုအဖို့မေ့လျော့ကြဘူးပူးတွဲသင်သည်သင်၏ဓာတ်ပုံ။ ဤတိုးပွါးလိမ့်မည်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းအောင်မြင်ခြင်း၊ကံကောင်းပါစေ။ မင်္ဂလာပါ၊ကျနော်ပေးချင်တစ်ဦးကိုအကျဉ်းချုံးအကျဉ်းချုပ်အကြောင်းကောင်းတစ်သူတစ်ဦးအ၊ငါသည်တခက်ခဲတဲ့ဘဝအခြေအနေ၊ငါ့အချစ်ကျန်ရစ်ငါ့ကိုငါမသိခဲ့ပါဘူး၊ဘာလုပ်ရပြီးတော့သုံးကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ဗစ်ကြှနျုပျတို့သညျအကြီးအပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏အကြောင်း၊သင်သိလား၊ငါဖြစ်၏ရလဒ်နှင့်အတူပျော်ရွှင်၊ကူညီပေးခဲ့တဲ့ငါ့ကိုအများကြီး၊သင့်စာမျက်နှာသို့မဟုတ်နေဆဲဆုံးဖြတ်ကြောင်းဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရွေ့လျားရွာမှအပြုံးများအတွက်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်။ အဘယ်ကြောင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားချက်အလက်အင်တာနက်ပေါ်စုဆောင်း၊အဖြေအတွက်အစိတ်အပိုင်း၊အခါအရာအားလုံးအရေးကြီးပါသည်နှင့် အဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်အပေါ်ငါတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ဤသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အထူးပြုသောငှားရမ်းခအိမ္ရာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနှင့်အပြင်၊တစ်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးဝန်ဆောင်မှုများကိုများအတွက်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ထောက်ပံ့သတင်းအချက်ကိုအထောက်အသုံးပြုသူများနှင့်ကျန်သောအရပ်ဘို့အသင့်လျော်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကလှုပ်ရှားမှုဖြစ်အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု:ကျွန်တော်ကူညီပိုင်ရှင်၏တိုက္ခန္း၌ထုိင္း၊ပိုက်ဆံများအတွက်ငှားရမ်းအိမ်ခြံမြေ။ အကြှနျုပျတို့အားကျေးဇူးတင်ပါသည်၊အများအပြားပိုင်ရှင်များ၏တိုက်ခန်းနှင့်အိမ်အတွက်ကူသား Recouped သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ ထို့အပြင်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အမြဲရအရည်အသွေးမြင့်မားနှင့်အကျိုးရှိစွာအပိုဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင်၊တုိက္ခန္းပြုပြင်ရေး၊သန့်ရှင်းရေး၊အိမ်များနှင့်တိုက်ခန်းများ၊လေအေးပေးစက်ပြုပြင်၊ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ရေကူးကန်နှင့်ဥယျာဉ်များ၊အဖြစ်တရားဥပဒေကြောင်းအဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အခက်ခဲဘဝအခြေအနေ။ အမြဲတက်ယနေ့နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အတူဖြစ်ရပ်များအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှကျေးဇူးတင်စကားကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းအပိုင်း။ အားလုံးသတင္းမ်ားကထုိင္းအကောက်တစ်နေရာတည်းတွင်ကျမ်းစာ၏အခြေခံပေါ်မှာသက်သေပြ။ မထုတ်ဝေကောနှင့်ထင်မြင်ချက်၊ဒါပေမယ့်သာအချက်အလက်။ ကျနော်တို့ကောင်းသောခံစားရ ဒါဟာအဖြစ်လူသိများသည်တစ်ချက်ပိုင်ဆိုင်၊ဒါကြောင့်တက်ကြွစွာဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးတည်လမ်းညွှန်မှထိုင်းနိုင်ငံ၊အထိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံအသက်တာ၏အပြုံးများ၊ပုံပြင်များ၏ကျွမ်းကျင်သူများ၊အကြောင်းပြောဆိုထိုင်းအသီးကိုသီး၊လယ္မ်ားတည္ရွိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊အကောက်ခွန်၊တားမြစ်ချက်၊စည်းမျဉ်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏။ စတင်အိပ်မက်မက်ကြောင်းခရီးသွားလာ၊ဒါပေမယ့်မဘယ်မှာမှစတင်မသိ။ ငါလှိုက်လှဲပျူငှာစွာဖိတ်ခေါ်ပူးပေါင်းဖို့ဤအသစ်အသိုင်းအပျော်ခရီး။ ဖိတ်ဖိုင်ကိုပူးတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုဒ်ပြီးမှပေးပို့၏အဆွေခင်ပွန်းအပေါင်းတို့သည်အိပ်မက်မက်တဲ့သူတွေ၊မကြာခဏခရီးသွားလာနိုင်နှင့်တွေ့ရှအသစ်အခွင့်အလမ်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်မှာပြသပြား boyhood။ ဒါဟာမကြာခဏဆွဲဆောင်နေသောလူပျင်းနှင့်တွေအများကြီးရှိသည်ဖို့အကြောင်းပြောဆိုမှုကြောင့်၊ဘုံဝါသနာ၊အကျိုးစီးပွား၊နှင့်အသက်ရာထူး။ အခါအသားအတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူဗမာမိန်းကလေးများ၊အဖြစ်မကြာမီများ၏ခေါင်းစဉ်အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အစပြုအရွင္ဇဝါသနာ၏အသာယာသောအဖော်။ ပထမဦးဆုံးမိနစ်၊နာရီ၊သို့မဟုတ်ရက်ပေါင်း။ အဖြစ်ယောက်ျားများ၏ထက်ဝက်ေမးခြန္း၊အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့နယူးရည်းစားရဲ့ဝါသနာ? ပထမတစ်ချက်မှာ၊ဒါကြောင့်ထင်ရစေခြင်းငှါအကြောင်းဤအကြောင်းအရာပြီးသားထင်းနှင့်သင့်ဆွေးနွေးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမပါဘူးစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုခု။ အဆိုအများစုမှာအမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီးလိင်အတော်လှ trinkets၊နှင့်အမျိုးမျိုး၏ဖန်တီးမှုဒဏ္ဍာ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ထိုကဲ့သို့သောမိန်းကလေးများ၊ထိုသူတို့အလုံးမဟုတ်။ အများအပြားရှိပါတယ်သူတို့ကို ကိုယ်စားလှယ်၏အဆင်းလှသောလိင်၊အဘယ်သူဓံအတွက်တိုင်းအရသာနှင့်၊ယောက်ျားတွေနှင့်ပင်တစ်အကြောင်းပြချက်ရှိနိုင်ပါသည်ဆက်လက်ချိန်းတွေ့အတွက်အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ မပါဘဲ။ မိန်းကလေးများတစ်ခါတစ်ရံအမာဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အမျိုးသမီးဝါသနာ၊ထိုသို့အားဖြင့်အောင်စိတ်နှလုံး၏ယောက်ျားတွေရိုက်နှက်။ ဒီမဇာ၊ကြိယာ၊ပန်းထိုးသို့မဟုတ်ကခုန်သင္ခန္းစာမ်ား၊ဝါသနာနှင့်သောသူတို့သည်အမဲလိုက်ခြင်း၏အသက္ကိုအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ။ အချို့သောအယူကရိန်းတွင်အမျိုးသမီးကစားတဲ့စကားပြောဖို့လိုယူမှလိုချင်သောအနေအထားအတွက်နှလုံးအနိုင်ရနိုင်ရန်အမျိုးသားတဝက်၌သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်သည်သင်၏သစ်ကိုရည်းစားဖြစ်၏ကြီးမားတဲ့ပရိတ်သတ်ဘောလုံးကွင်း၊နှင့်မိန်းကလေးများ၊ကိုကျေးဇူးပြုပြီးဒီကောင်လေး၊တက်ကြွသောအမှောင်များပေါ်လာဖို့စတင်။ ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိသောအလွယ်တကူအာရုံကိုလျှို့ဝှက်၊နှင့်လူငယ်အမျိုးသမီးသည်သူ၏၊ထိုအခါထိုလုလင်သည်အလျင်အမြန်အကျိုးစီးပွားရှုံး။ အားကစား။ စိတ်မျိုးသမီးများ၏အားကစားလှုပ်ရှားမှုများထွန်းနိုင်တဲ့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များ:သေးငယ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ၊အထိုင်များအလုပ်၊နှင့်ကြွက်သားလိုအပ်အဖြစ်အကောင်းပုံသဏ္ဍာန်အတွက်၊အဖြစ်ကုမ္ပဏီ အတူတကွသူမ၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ၊သူမရရှိခဲ့အလေးချိန်နှင့်အလေးချိန်များဆုံးရှုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊နှင့်ခဲအတော်အတန်တက်ကြွကျန်းမာဘဝ။ ယူကရိန်းကစားတဲ့စကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူ၊သင်ရနိုင်ကျွမ်းရှာတွေ့၊တစ်ဦးအဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောဘော်သောသူသည်အထူးခရီးကျန်းမာရေးကိုကလပ်သို့မဟုတ်ပခုံး။ သို့သော်လျှင်သင့်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်သည်နက်မှာပါဝင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အားကစား၊ဒါပေမယ့်သည်မဟုတ်၊ထိုအခါသင်သည်ဆက်ဆက်ရှိသည်ဘုံအကြောင်းအရာများ၏စကားဝိုင်းပင်လျှင်သင်ကအားကစားကိုချစ်မြတ်။ ဒီနေရာမှာကိုယ့်သေးငယ်တဲ့စာရင်းအမျိုးသမီးအားကစားဝါသနာ:ခိုင္ေ၊ရေကူး၊အဘိလိယက်၊ကာယဗလမယ်။ ဤသည်ကိုလည်းပါဝင်သည်:မြားပစ်သို့မဟုတ်ရိုင်ဖယ်သေနတ်ပစ်၊ဘောလုံး၊လက်ဝှေ့၊တင်းနစ်၊စစ်တုရင်၊နှင့်ပို။ မိန်းကလေးများ၊သင်ရွေးချယ်။ သူအမျိုးသမီးများအတွက်စိတ်အားထက်သန်အမဲလိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ငါးဖမ်းထိုက်အထူးလေးစားထံမှ။ သူတို့သည်မောမှာအများ၏ရှေ့တော်၌အဖမ်းလတ်ဆတ်သောအပေါ်သွေးခုန်နှုန်း၊အမိုး၊မသကဲ့သို့အဆိုပါရွှံ့သို့မဟုတ်စိုစွတ်သောခြေ။ တည္ေနရာ၊မီးရႈိ၊ပြင်ဆင်ထားတဲ့အမွှေး Kulesh သို့မဟုတ်သင့်အပေါ်နားရႈိနှင့်အလွန်ပျော်ရွှင်စေ မင်္ဂလာကြောင့်သူမရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်။ ကားေ။ အများစုကဗမာမိန်းကလေးများချိန်းတွေ့အခမဲ့ချက်တင်ကစားတဲ့ဘယ်လိုသိမှမောင်းနှင်တဲ့ကား။ အမကသာလွလွ၊ဂုဏ်သတင်း၊ဒါပေမယ့်လည်းလက်တွေ့မတွန်းအားပေးရန်အတွက်ရထားသို့မဟုတ်အခြားအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊မစိုးရိမ်ကြက၏ရှေ့မှောက်တွင်အထီးအတွက်အသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်၊စုံတွဲများကိုမရှူရှိုက်မိသောအမွှေးအသက်ရှုအတွက်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတံခါးပိတ်ပး။ သို့သော်၊ထိုအခါသတိရသင့်သည်မြို့ကြီးများအတွက်၊အားလုံးန်အပေါ်အလမ်းများ၊သင်တန်း၏၊မျှော်လင့်လွေ။ အမျိုးသမီးယာဉ်မောင်းများကွဲပြားခြားနားပါသည်။ သူများမောင်းကြောင့်သူတို့တက်ရောက်ပြီးခေတ်နှင့်ပင်မသိကြပါအရပ်ခေါင်းအကား၊ပီးလွဲခံစားချက်အတွက်အမျိုးသားများအနား၊ရယ်မောခြင်း၊ယားယံခြင်းနှင့်ပင်အမျက်ဒေါသ။ ဒါဟာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါကြောင်းအဆိုပါအားကောင်းလိင်အကြောင်းမိန့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမောင်းနှင်ဘေးဥပဒ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်၊သောအခါထိုမိန်းကလေးအတွက်ရှိုးအလေ့အကျင့်မဟုတ်ကြောင်းသာဟာကားမောင်း၏၊ဒါပေမယ့်လည်းအလွယ်တကူပြုပြင်စနစ်၊ထိန်းချုပ်ထားသော၊သင့်ရဲ့သံကမြင်းသည် Disarmed နှင့်အနိုင်ရခဲ့၏။ အစွန်းရောက်။ အတွက်အခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်၊သင်တွေ့ဆုံရန်မရှိသလောက် သူတစ်မိန်းကလေးတစ်ဦးသည်အတွက်စေ့စပ်လှိုင်း၊စွန်လွတ်လှိုင်းစီး၊ရေငုပ်၊အလယ်ပိုင်းဒေသ၊ဖောင်၊လေထီးခုန်နှင့်အများကြီးပို။ အဖြစ်မကြာခဏအရူးအနေများအပေါ်၏လှပသောထက်ဝက်အသက်တာတည်ဆောက်ဖို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူယောက်ျားလိင်နှင့်အတူအလားတူအကျိုးစီးပွား။ ၂၄ သည်နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု။ ကျနော်တို့ဧည့်သည်များဆွဲဆောင်၊ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှ၊ဒါပေမယ့်သင်တန်း၏၊ရုရှားစကားပြောပရိသတ်များအ CIS နဲ့ဘောလ်တစ်နိုင်ငံစိုး။ စာရင်းဇယားပြပွဲကြောင်းလူအများကြီးပြောယူကရိန်း၊အရာအံ့သြစရာမဟုတ်ပေးသည်တိုင်းအကြောင်းပြချက်ကြောင်းပြော ၂၄ အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အတွက်ယူကရိန်း။ ရော။ ရော။ ရော။ ဒီအဆောင်ပုဒ်၏ခေတ်သစ်လူ့ယဉ်ကျေးမှု။ လူတွေကပိုပြီးလွတ်လပ်သောအသီးအသီးအခြားပိုမိုဖြေလျော့ပေးခြင်း။ အပေါင်းခေတ်မီနည်းလမ်းဆက်သွယ်ရေးခွင့်ပြုကြောင်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်။ ဒီကိရိယာက ၂၄ ယူကရိန်းချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈။
အသာလွန်၏ဒီဗီဒီယိုချက်တင်ဟုခေါ်သည်ဟူသောအချက်ကိုရှိအွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ မပါဘဲ။ ဤချက်တင်ဖွင့်ချင်သူတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊တစ်ဦးဖျော်ဖြေမှုအဖော်၊သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဘို့အချိန်းတွေ့နှင့်လူမှုရေး။ ကြောင့်သင်သည်အသက်ရှင်သောချက်တင်ကစားတဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်၊ရှိပါတယ်ကြီးမားသောအရေအမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများ။ ငါအကြောင်းပြောအားလုံးသင်တန်းသားများ။ ဒီဗီဒီယိုစကားပြောခွင့်ပြုလျှင်ပင်သင်အောက်တွင်အသက် ၁၈။ ထို့နောက်အလျင်အမြန်တက်တွေ့ဆုံရန်။ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံရန်နှင့်အတူပြုလုပ်ငယ္ခ်င္းဆက်သွယ်ရေးများအတွက်အကြောင်းပြချက်များအတွက်၊သို့သော်ဤချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ငါ့ကိုဆုကိုတောင်းအဘယ်ကြောင့်။ အကြံပေးရန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်၊ဒါကြောင့်များစွာသောလူသွားရောက်ကြည့်ရှုချက်တင်ကစားတဲ့တာမ်ဳိးတပ္ကွာ။ ဒါဟာမှားယွင်းနေသည်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ထံမှမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူရုရှား-ဤစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နှင့်အညီ၊သင်တန်း၊သင်ချင်ကြပါဘူးလောင်ဘဏ္ဍာရေးဖြစ်စေ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပယ်၏ရေအကြောင်း၊အခမဲ့ကစားတဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောမည်၏။ နှစ်သက်ဘာမျှမအဘို့နှင့်ဘာမျှမအဘို့သင့်ရဲ့ကာလအပေါ်။ ပြီးမှရလာမယ့်ဗီဒီယိုချက်တင်။ သူသည်၊သင်တန်း၏၊အခကြေးငွေအတွက်၊သို့သော်၊သင့်မစိုးရိမ်ကြ။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်း၏ရုရှ-အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ။ ချစ်ကြည် အပါက္လည္းဝဘ်နေရာကထွက်သယ်ဆောင်နှင့်အညီပညတ်တရား၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းဗီဒီယိုချက်တင်ပါဝင်၏ကြီးမားသောအရေ။ သင်အဆက်မပြတ်စားသုံးဒေရွေးချယ်မှု၏။ စကားပြောနှင့်ကစားတဲ့စကားပြောနှင့်ကစားတဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အတွက်ရုရှားစကားပြောအသုံးပြုသူများနှင့်အတူသာ Krug။ ၏သင်တန်းကျော်၊ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့တက်ရောက်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများမှရုရှားနှင့်၎င်း၏မြို့တော်မော်စ။ မတရားမျှတသောမြောက်ပိုင်းမြို့တော်အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် St။ ဘတ်။ သို့သော်၊ဤအပြင်၌၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ငြိမ်းလူကွဲပြားခြားနားတဲ့ရှုထောင့်မှစ။ အဓိကကျပန်းဘော်များမှာလူများမှဤတီ:ရုရှား၊ယူကရိန်း၊မော်လ်ဒိုဗာ၊အာေမးနီးယား၊အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ကာဇတ္စတန္၊ဥဇဘက်၊တာဂျစ်ကစ္စတန်၊လတ္ဗီးယား၊လစ္သူေရး၊အက္စ္တိုးနီးယား၊အာေမးနီးယား၊အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ေဂ်ာ္ဂ်ီယာနှင့်အရှေ့တောင်။ ဝင်ရောက်ခြင်းသည့်အခါတစ်ဦးကဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူတစ်ဦးကိုကျပန်းအဖော်၊ကအပျော်အများကြီးဆီး။ မမြင်နိုင်သောအစည်းအဝေးနှင့်အတူလူ၊န့်အသတ်ခင်မင်ရင်းနှီးနှင့်ဝေမျှခြင်းသတင်းနှင့်အတူနေသောသူတို့အလွန်ဝေးကြသည်မဟုတ်။ ဒါဟာအခွင့်အဘို့အစိတ်ဝိညာဉ်၌ဟောပြောဖို့ညှတျတညျးသို့မဟုတ်အလုပ်-ယုံကြည်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်အတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူအလှအပ။ အဘယ်ကြောင့်ဂုဏ်။ နှင့်ဤဖြစ်ပါသည် ဒါနဲ့ပတ်သက်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြားရုရှားမိန်းကလေးများသည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောကိုဖြည့်ဆည်းဖို့မ-စိတ်ဝင်စားသူတွေ။ သို့သော်၊ဒီနေဆဲအတူတူရုရှားအမျိုးသမီးများအထူးအကြောင်းအရာ။ ၏အခြေခံဥပဒေကိုကျပန်း၏မိတ်ဆွေရှာဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူတစ်ဦးကိုကျပန်းအဖော်တစ်ပြိုင်တည်းဖမ်းဆီးရမိသူများ၏စိတ်နှလုံးကို။ ဤသည်ကိုလည်းလိုအပ်နိုင်ရန်အတွက်စတင်အတူစကားလက်ဆုံပန္းအဖော်။ စတင်ရန်၊လာမှအထက်ပါအမြင်ဆိုက်သောကြောင့်၊သီးသန့်အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်ကစား။ လာမယ့်အကျိုးကိုသက်ဝင်စေဖို့ဝက်ဘ်အခန်း။ နောက်ပိုင်းမှာသာဒီခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ နှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုစတင်ရန်အတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်။ ခွဲကိုဆက်သွယ်တာနဲ့အတူမှန်ကန်သောအဖော်။ ပြီးသင့်ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်၊ဆုံးဖြတ်:ဆွဲဆောင်သင်ဖြစ်စေမ၊မ။ အဖော်ရွေးချယ်အပေါ်မူတည်။ ဗီဒီယိုချက်တင်အွန်လိုင်းတရားခွဲခြား၊အကောင်းဆုံးကိုဆက်ကပ်အပ်နှံ interlocutor။ ကမ်ချက်တင်ဗီဒီယိုချက်တင်-ချစ်ကြည်အင်တာနက်ကျော်။ ရွေးချယ်ထားမကြာသေးမီဖန်ဆင်းည့်အတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ပေါင်းစပ် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တူညီသောပြဋ္ဌာန်းချက်များ။ သူတို့ကလည်းရှိမှုရပ်ဆိုင်းခွင့်အသွယ်မိမိတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ။ ဒါကြောင့်အကျင့်ကိုကျင့်ကိုရပ်တန့်ထီလေးစားပြုသောအမှုအရာ။ နောက်ပိုင်းတွင်၊ခ်ိတ္ဆက္ေကိုစကားပြောခွင့်ပြုဖို့အာရုံကိုဆွဲဆောင်၊ဗီဒီယိုသင်သည်သင်၏ဝဘ်အခန်းကြည့်ဖို့လူတိုင်းအတွက်။ ဆိုက်သည်အမည်မသိနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ သီးသန့်ရက်စွဲများနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးနှင့်အတူချစ်စရာမိန်းကလေးငယ်များ ၁၈ နှစ်နှင့်အဟောင်းတွေ။ အလွန်မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ပေါ်ပေါက်ပျင်းစရာကောင်းများ၏ထက်ဝက်ထက်သင်္ဘောနှင့်အခြားအမျိုးသားများအတော်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်အမျိုးသမီး။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအတွက်နေထိုင်ယူကရိန်းနှင့်ရုရှား၏ပထမဦးဆုံးအတန်းအစား၏နည်းလမ်း banishing စိမ္းအရသာဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူလှပသောမိန်းကလေး။ တချိန်တည်းမှာပင်၊ငါလိုသောသင်ကိုသတိပေးအထက္ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များ ၁၈ နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပါသည်ထုတ္မႈမ်ားခြားစကားပြောသည့်အကြောင်းအရာကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်ကြောင်းငါတို့နှင့်အတူအမျိုးသားယိမ်းနွဲ့များ၏ရှေ့မှောက်၌ဗတ်၏။ ကစားတဲ့စကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်သည်ချက်ချင်းအကောင့်ဝင်အတွင်းပထမဦးဆုံးစက္ကန့်တားမြစ်ထိုကဲ့သို့သောနောက်လိုက်များ၏၊အမျိုးသမီးနှင့်လွှမ်းမိုး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ကဟုခေါ်သည်ဝဘ်ချစ်ကြည်ရေးအတွက်သဘောတူ၏ဝဘ်အာကာသမပါဘဲမွတ္ပံုဗ်၊မော်နှင့် St။ ဘတ်။ သွင်ရာထူးသာ retrograde။ ငါ၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းမှတ်မိဖို့ပြန်-ဤ၊ဟုတ်ပါတယ်၊အမျိုးသမီးအသက် ၁၈။
စကားပြောပေးအခွင့်အလမ်းများအတွက်အမည်မသိဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်ဝဘ်။ ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသည်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးကိုအထူးယန္တရား၏လုံခြုံရေးစိ:ဝင်ရောက်ရန်အဖြစ်တတ်နိုင်သမျှမပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊ကျပန်းအမည်များနှင့် avatars အဘို့အတွင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အကွင်း။ စကားပြောပေးအခွင့်အလမ်းများအတွက်အမည်မသိဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်ဝဘ်။ ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးကိုအထူးယန္တရား၏လုံခြုံရေးစိ:ဝင်ရောက်ရန်အဖြစ်တတ်နိုင်သမျှမပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊ကျပန်းအမည်များနှင့် avatars အဘို့အတွင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အကွင်း။
သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဘို့အဆက်ဆံရေးအသစ်၊သို့သော်အချို့သောအကြောင်းပြချက်များမယုံကြည်စေဖို့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း၊ကြောက်လန့်ဖြစ်ခြင်း၊ငြင်းပယ်ခြင်း၊သို့မဟုတ်မသိရပါဘူးဘယ်မှာကစကားစတင်ရန်အ၊သင့်ရဲ့ကံကြိုးစားပါနှင့်စတင်တွေ့ဆုံအမျိုးသမီးများအတွက်အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်။ အသစ်အကျွမ်းနှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏အဆင်းလှသောလိင်သယ်ဆောင်များအပြားအပြုသဘောရှုထောင့်။ ဆွဲဆောင်၏အကျိုးစီးပွားအမျိုးသမီးများရှာဖွေသူတို့တွင်သာ၊သင်လိုအပ်အပေါ်မှီခိုဖို့အချို့ဟာဗျူဟာများအတွက်အောင်မြင်သောချိန်းတွေ့အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ အဆိုပါမိန်းကလေးကတိပြုခြင်းအားဖြင့်၊လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊သင်လိုအပ်ကြောင်းကိုဂရုတစိုက်စဉ်းစားရန်သင်၏။ ပင်လျှင်သင်အခမဲ့ချက်တင်ကစားတဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ၊ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်သေချာသောအသွင်အပြင်။ သင့်ရဲ့အလားအလာပါလိမ့်မယ်ရည်းစားအမြင်အာရုံကြော၏အသွင်၊ဆံပင်၊အဝတ်အစား၊ပတ်ဝန်းကျင်၊ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုအောင်မြင်ရန်လိုအပ် ကောင်းစွာပြင်ဆင်။ အစဉ်အမြဲယုံကြည်စိတ်ချ၊ဖြာအေးဆေးတည်ငြိမ်နှင့်တည်ငြိမ်ရေးကို။ တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချလူအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်မိမိကိုမိမိ၊သူဖွံ့ဖြိုးဒီစွမ်းရည်ကိုသာ။ သို့သော်၊စိတ်မရှုပ်ဤအရည်အသွေးနှင့်အတူရိုင်းစိုင်း၊စော်ကား၊haughtiness။ ငယ်ရွယ်ပြီးရင့်ကျက်နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသမီးအတွက်ဗီဒီယိုစကားပြောချင်ကြည့်ဖို့ယောက်ျားအဖြစ်တစ်ဦးခိုင် monolith၊တစ်အခိုင်အကျောက်ခေတ်၊ယုံကြည်စိတ်ချရသောအထောက်အပံ့နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ ဤသည်မည်သို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ယုံကြည်မှုအတွက်မိမိကိုမိမိ၊သူ၏စွမ်းရည်နှင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရပ်မြင်သည်။ အာရုံကိုဆွဲဆောင်ဖို့အမျိုးသမီးများအတွက်အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်၊ထွက်မတ်တပ်ရပ်မှအထွေထွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်၏။ ဒါဟာစတိုင်အဝတ်ကို၊လှပတဲ့ဆံပင်၊အထူးအလမ်းများ၏အပြုအမူ၊စိတ်ဝင်စားဖို့င့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ဒါကြောင့်အပေါ်။ သင်ကြိုက်လျှင်သီချင်းဆိုမည်ဖို့သို့မဟုတ်ကစားသည့်တူရိယာအဖြစ်၊သူသည်မတော်တဆထား၊ဒါကြောင့်သူကအောက်စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းသင်သည်သင်၏ကမ်။ သေချာပါလုံလောက်တဲ့၊အသစ်၊မိတ်ဆွေသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်၊နှင့်စကားပြောဆိုတတ်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်။ လျှင်သင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရှိသည်မြင်ယောင်ကြည့်လို့ရတယ်၊ဘယ်လောက် အ interlocutor ကျင်းပဗီဒီယိုချက်တင်။ သင်ရှိစေခြင်းငှါအများကြီးသုံးကြောင်းအရာအကြောင်းကိုပြောပြအဖြစ်၊အမျိုးသမီးများကိုမကြာခဏအတွက်စိတ်ဝင်စားပေါက်၊ခွေးနှင့်အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ။ ကျော်လွှားသင့်ရှက်ကြောက်ရှက်ကြောက်။ ကြိုးစားတင်စကား။ အခမဲ့တိုက်ရိုက်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲသင်ကူညီလိမ့်မည်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း Indecision နှင့်စိုးရိမ်နှင့်အမြင်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသော။ နှင့်အတူစတင်နှုတ်ခွန်းဆက်၊မမေ့သောအသံနှင့်အသံသြဇါလည်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ မေးဘယ်လိုမကြာခဏလူငယ်အမျိုးသမီးကြိမ်လာသွား Zhiznex နှင့်လှုံ့ဆျောသောအရာကို။ ပေးရတဲ့ရင်းမှန်နဲ့ချီးမွမ်းပြီးသူမ၏တုံ့ပြန်မှု။ အတွက်အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူအမျိုးသမီးများမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ၊သငျသညျအစဉ်အမြဲပေါ်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရန်လိုအပ်တဲ့အောင်ပွဲ၊အမှန်စိတ်ရှိပြီးသားတစ်ဝက်အဆင်သင့်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်နက်နှင့်ဟာသတစ်ခုဥာဏ်ကောင်းသော။ လျှင်သင်အလေးအနက်ရည်ရွယ်ချက်၊ကိုယ်၊စိတ်မဂိမ်းကစားကြိုးစားသို့မဟုတ်အခြားပုံများကို:အမျိုးသမီးများအလွန်ကြီးစွာသောကိုယ်နှင့်ခံစားချက်တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်အရာလိုဖော်ပြထားခြင်း:သင့်ရဲ့အများဆုံး အရေးလက်နက်အဖြစ်အပြုံးတစ်ခု။ အၿပံဳးကိုစိတ်ရင်းမှန်နဲ့နွေးနွေးထွေးထွေး။ အပြုံးလူတစ်ဦးကိုအမြဲနွေးပြီးအပြုသဘောနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်။ မှာကြည့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဥပမာ၊အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ကစားတဲ့အတွက်အသက်ရှင်သောချက်တင်ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်သင့်ရဲ့ပြီးအသစ်တစ်ခုကိုကျွမ်းပြုံးနှင့်အတူ။ သင်တန်း၏၊ရဟန်းသည်သဘောအားဖြင့်အဆိုပါမေးခွန်းကြောင်းသူကဆက်လက်ချင်ပါနှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်း။ ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ အခြေခံကျကျမှချဉ်းကပ်မှုအသစ်ဆက်သွယ်ရေး:အသုံးပြုသူများအအွန်လိုင်းတွေ့ဆုံရန်နှင့်သိလာအောင်အသီးအသီးအခြားအသုံးပြုပြီးကမ်။ ဒါဟာသတိပြုသင့်ကြောင်းထိရောက်မှု၏အထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ အလွန်အရမ်းမြင့်မား။ စပ်စုနှင့်အနီးကပ်အလွန်ခန့်မှန်းရခက်၊သင့်ရဲ့အချိန်ကိုခံစားတွက်ဥရောပဗီဒီယိုချက်တင်။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်စိတ်ဝင်စားဖို့လူများအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ၊နှင့်ဤသည်အဘယ်အရာကိုဆွဲဆောင်သင်အရှိဆုံးကမ္ဘာအတွက်။
ချက်တင်ကစားတဲ့ကမ်းလှမ်း၎င်း၏ဧည့်သည်များအခမဲ့စစ်မှန်သော-အချိန်ဆက်သွယ်ရေး အချိန်ကန့်သတ်။ အသစ်အသိအကျွမ်းနှင့်ကျပန်းရင်ဆိုင်ဆောင်သစ်တစ်ခုခုနှင့်ယခင်ကအမည်မသိကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာမှ။ ဆက္သြယ္ေအွန်လိုင်း၊ကျွန်တော်ဖွင့်၊သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကမ္ဘာကိုအပေါများကြွယ်ဝ၏အသက်ဝိညာဉ်နှင့်တဖြည်းဖြည်းနားလည်မှတဆင့်လက်ရှိအခြေအနေများနှင့်ဘဝအသက်တာ၏။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးမ်ား interlocutors အပါအဝင်၊သင့်ရဲ့အလားအလာရည်းစား၊ရည်းစား၊အနာဂတ်ခင်ပွန်း၊ဇနီး၊ရည်းစား။ အများအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအစည်းအဝေးနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းအတွက်အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအစဉ်အလာအတွက်လောကအစစ်အမှန်ကမ္ဘာ။ သင်ကရန်မလိုအပ်ပါအဝင်သင့်ရဲ့အပြည့်အဝအမည်သို့မဟုတ်အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဒီမှာ။ အတွက်အခမဲ့ကစားတဲ့ချိန်းတွေ့စကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်နိုင်ဆက်ရှိနေ incognito နှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းမှာအဖြစ်၊သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အတူ၊သင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်သင့်ရဲ့အခြေခံမူများ၊အမြင်၊သင့်ရဲ့အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များ။ သင်မြင်ကြလျှင်မနှစ်မြို့ဖွယ်အတွက်လူတစ်က်ဘ်ဆိုက်၊အရာသင်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်အလေးအနက်ကိုထင်၊သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး၏စည်းမျဉ်းများအတိုင်းလိုက်နာသွာနှင့်ဆက်လက်သည်းခံက ။ ဘဲနောက်ထပ်ကြောင်းသတိပြု၊ပြောင်းလဲဖို့အခြားသူတွေအကြောင်းမေ့လျော့ဒီလုံးဝသဘောအစည်းအဝေး။ ဒီဘက်ပါ၊သငျသညျတတ်နိုင်ဖြစ်သင့်ဖို့ဆက်လက်လျှင်အသစ်ရဲ့မိတ်ဆွေအတွက်တစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓါတ်များနှင့်လည်းအစည်းအဝေးသင်ဘဲဇွတ်အပေါ်ချင်ရှိမရှိဆက်လက်။ တစ်ခုအတွက်နေစဉ်အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမွတ္ပံု၏ရှာဖွေရေးအတွက်အသစ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အစည်းအဝေးသင်မေးမြန်းသင့်ပါတယ်၊သူ့ interlocutor။ ဒါဟာမလိုအပ်ရန်အာရုံစိုက်ဖို့သာကိုယ့်ကိုယ်ကို၊အငြင်းအတွက်အသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အနက်အဓိပ္ပာယ်။ တူ၏အကူအညီကမ်၊သင်ရှိသည်နိုင်စကားလက်ဆုံနှင့်အတူလူအတော်များများမှကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများ၏ကမ္ဘာ့ဖလားအင်တာနက်ပေါ်မှာ၊နှင့်နီးကပ်ရန်အသီးအသီးအခြားအဖြစ်သင်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ။ အခမဲ့ကစားတဲ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ဝဲကအင်တာနက်အသုံးပြုသူများနှင့်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တစ်မူထူးခြားသောရာအရပျအသွင်အစည်းအဝေး။ ရှိသည်သောသူတို့အဘို့နည်းနည်းအတွေ့အကြုံချိန်းတွေ့နေသောဖြစ်ခြင်း၏ကြောက်လလွဲသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်၊စစ်မှန်သောအသက်တာ၌၊ချိန်းတွေ့အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများဖြစ်အသက်ကယ်ရန်ကူညီနိုင်ဖို့သင်၏စိုးရိမ်နှင့်။ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်တိုးမြှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှု။ ချက်တင်ကစားတဲ့ပေးသည်နှင့်သင်တစ်ဦးထူးကဲအခွင့်အထံမှသင်ယူဖို့အသင့်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံဘာသွင်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအပေါင်းတို့နှင့်ပတ်သက်။ ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူခံစားချက်ထသော၊နှင့်နားလည်အတိမ်အနက်နှင့်အာဏာ။ ခံစားရ၏အဓိပ္ပာယ်ရင်းနှီးတဲ့သူထဲကနေကွဲကွာသည်သင်အားဖြင့်ရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကီ။ ဒါပေမယ့်သင်မရှိဘဲဘဝကိုမြင်ယောင်ကြည့်မရနိုငျအသစ်ရဲ့မိတ်ဆွေ။ ထွေးဆက်သွယ်ရေးနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းအတွက်အခမဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲသင်ကူညီလိမ့်မည်ပိုကောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်ပြီးမျှဝေသင့်ရဲ့သူဌေး၏အတွင်းစိတ်ကမ္ဘာနှင့်အတူသူတို့အားနားလည်သောသူကောင်းစွာသင်နှင့်ပေါ်တူညီသောလှိုင်းအလျားနှင့်အတူ။ ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ အခြေခံကျကျမှချဉ်းကပ်မှုအသစ်ဆက်သွယ်ရေး:အသုံးပြုသူများအအွန်လိုင်းတွေ့ဆုံရန်နှင့်သိလာအောင်အသီးအသီးအခြားအသုံးပြုပြီးကမ်။ ဒါဟာသတိပြုသင့်ကြောင်းထိရောက်မှု၏အထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ အလွန်အရမ်းမြင့်မား။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကိရိယာများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများကိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်အမည်မသိစကားပြော-ကစားတဲ့သောရုရှားနှင့်ညီမျှ၏လူကြိုက်အမေရိကန်နဲ့အွန်လိုင်းကာစီနို။ အချက်တင်ဝန်ဆောင်မှု။ ခါလူသစ်နှင့်တွေ့ဆုံသည့်အတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်၊အများအပြားအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအဖို့ပိုနှစ်သက်တည် incognito၊မထင်ရှားသူတို့၏အမည်များ၊မြင်အောင်မနေပါနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးအဆင့်အတန်း၊သဘောထားများ၊နှင့်အခြားဒေတာ။ ခဲလှ၏အဖွင့်တဲကမတစ်ခုတည်းသောအရင်းအမြစ်၎င်း၏မျိုးအကြောင်းကမ်းလှမ်း၎င်း၏ဧည့်ထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အလမ်း။
ဖန်တီးချင်သူတွေအတွက်ဖြည့်ဆည်းမိန်းကလေးငယ်များ၊မိုက်၌Makassar နှင့်ဆောက်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါဦးဝင်း-ဝင်းဆက်ဆံရေးအတွက်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများနှင့်ဂရုတစိုက်အတိုင်းလိုက်နာစာချုပ်။ ဆိုက်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်ချင်သူတွေအတွက်ဆက်သွယ်ဖို့အတူမိန်းကလေးငယ်များ၊မိုက်၏Makassar နှင့်ဆောက်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါဦးဝင်း-ဝင်းဆက်ဆံရေးအတွက်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများနှင့် vigilantly စောင့်ကြည့်လိုက်နာနှင့်အတူစာချုပ်။ ငါ ၁၉ နှစ်အရွယ်ခဲ့ဖူးဆက်ဆံရေးအတွက်၊ငါကချစ်နယ်၊ဘော်လီဘောကစားခြင်းနှင့်ဓါတ်ပုံတွေကိုယူ၊ငါမျှော်လင့်တယ်အထွက်ကူညီရေးကြေးရေး၊လိုအပ်တယ်၊ကျွန်တော့်မိသားစုကိုကူညီပြီးများအတွက်ပေးဆောင်။
ကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုအခမဲ့ကစားတဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်၊အသက်ရှင်သောအစည်းအဝေးကနေတဆင့်ကမ်နှင့်ကျပန်းမိတ်ဆွေရှာ။ အားလုံးရုရှားစကားပြောကြသူအသုံးပြုသူများသည်အခမဲ့အင်တာနက်ကိုလက်လှမ်းနှင့်ကမ်နှင့်အတူတစ်မိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာလူကြိုက်များဂျာမန်အွန်လိုင်းချက်တင်။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများလာနေ့တိုင်းဘဲ၊မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေရန်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှု။ သုံးစွဲသူအများအပြားသုံးဝဘ်ချက်တင်ကစားတဲ့အတွက်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အပန်းဖြေကနေနေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အလုပ်။ ရိုးရှင်းပြီးမီနူးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လျင်မြန်စွာလက်လှမ်းအက္ပ္၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအထောက်အကူများ၏လူကြိုက်များကိုအခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်။ အဆိုအရအအက္ပ္ကို၊အားလုံးအသုံးပြုသူများ၏အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့အနည်းဆုံး၁၈အသက်အနှစ်။ အခြေခံပညာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏အပြုအမူနှင့်အရှေ့ဆက္သြယ္ေသာအခါမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ၊ဤသည်စည်းမျဉ်းတစုံတယောက်သည်အဘို့ဖြစ်၏။ အလွန်အရေးကြီးအစွန်အဖျားများအတွက်အောင်မြင်သောချိန်းတွေ့-ရိုးရှင်းသောစောင့်ရှောက် သင်၏မျက်နှာကိုအတွက်ဘောင်၏ကမ်မှန်ဘီလူး။ အဆိုပါရာခိုင်နှုန်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေစည်းအဝေး၏လူကောင်းတစ်ယောက်တိုးအခါအကြိမ်ပေါင်းများစွာအခြားလူတစ်ဦးကိုမြင်သငျသညျသာမန်အားဖြင့်။ ရုရှားဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်သည့်လက္ပတ္နာ၏နာမည်ကျော်နိုင်ငံခြားချက်တင်ကစားတဲ့၊သာနှင့်အတူတစ်ဦးကိုကျပန်းရှာရန်အတွက် interlocutors သာ-ရုရှစကားပြောနိုင်ငံများ၏ကမ္ဘာ့။ ချက်တင်ကအရမ်းလူကြိုက်များသောကြောင့်၊သင်သည်သင်၏ထူးခြားတဲ့လမ်း၏အလုပ်လုပ်ကိုင်၊ခွင့်ပြုသောအသုံးပြုသူများနှင့်အတူဘျ။ သင်တန်းသားများ၏အစီမံကိန်းဖန်တီးအသွင်အသိအကျွမ်းနှင့်အတူအသီးအသီးအခြားအတွက်ကျပန်းနိုင်ရန်၊အလားတူကစားတဲ့ဂိမ်း။ အတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်၊ဒါကြောင့်အလွန်လွယ်ကူချိတ်ဆက်ဖို့တစ်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးမျိုးနှင့်အတူအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏။ ရုရှားဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ ခမဲ့အဘို့အအာမခံချက်၏ကောင်းသောအားလပ်ရက်ထံမှမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူရုရှားနှင့်အခြားရုရှားစကားပြောနိုင်ငံများ။ အစည်းအဝေးတွင်ဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ အပေါင်းအလွန်လွယ်ကူသည်နှင့်ပျော်စရာ။ အထူးသဖြင့်အခါသင်သို့ပြေးသည်။ ဘယ်အရာကိုချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ မှတ်ပုံတင်ထား။ စေရဲ့ ကျနော်တို့ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ကတည်းက၊ကျယ်ပြန့်အများစုအရာ။ ပြီးတော့အတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အတွက်အရင်းအမြစ်လိုအပ်စကားပြောမိန်းကလေးငယ်များဂျာမန်အတွက်။ နှင့်ရုရှားမိန်းကလေးများအတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်အဆန်းမဟုတ်။ ရုရှားကစားတဲ့၊ချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများရန်လွယ်ကူစေသည်မိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်အတွက်ဖိုင်သို့မဟုတ်ဂျာမန်။ ဒါကြောင့်ငါ့ကိုအထင်ရသောနိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်တန်းအစီအစဉ်များအတွက်လုံလောက်၊ပုံမှန်ရက်စွဲများနှင့်အတူမိန်းကလေးများ။ လာရောက်လည်ပတ်သည့်အခါအချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈၊ကိုသာလိုလား၊ဒါပေမယ့်လည်းလက်မခံရန်မိန်းကလေးများသို့မဟုတ်အဘယ်အရာကိုသင်ပြသဘာဝပေးတော်မူပြီ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်မိန်းကလေး၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုအလှနှင့်သူ့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်း၏သေးငယ်တဲ့ဆိုဒ်များ၊သင်တို့ကိုယ်တိုင်အားပေးခံရဖို့သင်တို့အဝတ်အချည်း။ ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲသင်ကူညီလိမ့်မည်အနားယူနှင့်ပျော်စရာရှိသည်၊ဆက်သွယ်ခြင်းသည်မိန်းကလေးများအခမဲ့အွန်လိုင်းတိုက်ရိုက်ချက်တင်။ အဆင်ပြေတည်ရှိပြီးအိမ်ကနေ၊သင်လုပ်နိုင်မှာအနည်းဆုံးတစ်ဒါဇင်မိန်းကလေးများအတွက်ကစားတဲ့စကားပြောညဦးယံများအတွက်၊တစျရှေးခယျြနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအရသာ။ အစဥ္တက်နိယာမ ဗီဒီယိုစကားပြောကျုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိပါသလားသင်ပြုမှဘာမှမ။ ဒါဟာဖို့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်ပြောဖို့သူစိမ်းအကြောင်းရင်းနှီးသည့်အကြောင်းအရာ။ ပွင့်လင်းဆက်သွယ်ရေးသည်အဓိကအင်္ဂါရပ်များဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့။ အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖွင့်ဖို့ရေရှည်ဆက်သွယ်ရေးကနေတဆင့်ဗီဒီယိုချက်တင်။ ရိုးရှင်းတဲ့အတွက်ကစားတဲ့စကားပြောနှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ အွန်လိုင်းအကူအညီသင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းအပြုံးနှင့်ပျော်စရာရှိသည်နှင့်အတူအွန်လိုင်းသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်း။ လိင်ချက်တင်ချက်ချင်းချိတ်ဆက်သင်ကျပန်းအတူယောက်ျားတွေကနေတဆင့်ကမ်။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်လူတွေအွန်လိုင်းရှိသမျှကိုအချိန်လိုသူချိတ်ဆက်ရန်အဘို့သင်တို့နှင့်အတူပျော်ရွှင်စရာဗီဒီယိုချက်တင်။ ဤသည်အကောင်းဆုံးနေရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှအတူတစ်ကမ်။ သုံးစွဲဖို့အခမဲ့၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းလိုအပ်သောဒီကိုအသုံးပွုဖို့ကောင်းတဲ့စကားပြော။ ကျပန်းရင်ဆိုင်ကြားအမျိုးသားများရမ်းပျော်စရာဖြစ်ခဲ့ဖူး။ သူပြင်ဆင်အွန်လိုင်းနေသောၾကာင္း၊ဆွဲဆောင်မှု၊အထိပ်၊အောက်ခြေ၊ဝံနှင့် Twinkles။ လိင်ချက်တင်ဖြစ်ပါတယ်အံ့သြဖွယ်လမ်းအထိလူပေါင်းတွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်ပဲသူတို့ကိုသတ်ပစ် အချိန်ယူသောကြောင့်ဒါဟာလွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်တဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အခြားကလေးတွေနှင့်အတူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ ကျနော်တို့ကိုပူဇော်များစွာသောရွေးချယ်မှုများျဘယ်နေရာမှာမဆိုဤကဲ့သို့သောဆိုဒ်များတွင်အပါအဝင်တွေကိုရွေးချယ်ဖို့စွမ်းရည်တစ်နိုင်ငံဆက်သွယ်မှု၊အတူချိတ်ဆက်ကြသူအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးကမ်ကူျ၊အများကြီးပို။ လည်းအများအပြားရှိပါတယ်အခြားအေးစကားပြောရွေးချယ်စရာကျပန်းစကားပြော၊အဖြစ်အတူတူလိင်ချက်တင်မှလွဲ။၊သင်ချိတ်ဆက်ထားလိမ့်မည်အပေါင်းတို့နှင့်အတူလူအမျိုးအစား။ အဆိုပါအားသာချက်ရှိပါတယ်ပိုပြီးအသုံးပြုသူများအအွန်လိုင်း၊သင်တို့အဘို့အရှာနေဖြောင့်သောသူယောက်ျားတွေဖြစ်စေခြင်းငှါချင်၊ဒီအရှိစေခြင်းငှါကောင်းတစ်နေရာကိုရှာဖွေ။ အခြားစကားပြောအတွက်ရွေးချယ်စရာများ၊သင်ကြိုးစားနိုင်ပါထည့်သွင်းရန်စကားပြော ၄၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောတစ်ဦးကိုကျပန်းစကားပြောမှလွဲ။၊သင်ချိတ်ဆက်ဖို့ ၄ စိမ်းတဦးနဲ့တစ်ဦးစကားပြောဖို့ခွင့်ပြုသောချက်တင်နှင့်အတူလူမျိုးအပေါ်အခြေခံ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားရွေးချယ်စရာလိင်တစ်ဦးတစ်လွယ်ကူဖြည့်ဆည်းရန်:အဂၤါစတင်ကြကုန်၏တည်းဖြတ်သင်အခြားယောက်ျားတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ။ ကိုနှိပ်ပြီးနောက်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ပန္းအလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွက်၊ပြီးတော့သင်ပြောနိုင်။သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်သူသင်ရန်တာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်၊အဆိုပါပေါ်တွင်နှိပ်ပါလာမယ့်ခလုတ်ကိုသင်ချိတ်ဆက်ထားလိမ့်မည်အခြားအသုံးပြုသူအွန်လိုင်း။. သင်ဥပဒေရေးရာအသက်အရွယ်ဖို့အသုံးပြု၊နှင့်အကျင်းပြသဖို့အခွင့်မ၏စည်းကမ်းချက်များကိုအောက်တွင်အသုံးပြုခြင်း။ သင်ပြောပြသောအဆင်ပြေနေသမျှကာလပတ်လုံးကြောင့်ဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါသည်။ ကိုသင်ဖွင့်တဲ့အခါလိင်ချက်တင်စာမ်က္ႏွာမ်ား၊သင်ကိုသက်ဝင်ချင်သောဝက်ဘ်ကမ်။ ပြီးသက်ဝင်ကမ်၊သင်စတင်နိုင်ပါသည်ကစားကျပန်းယောက်ျားတွေအဖြစ်အလွယ်တကူလစ်နှိပ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ရပ်တန့်ဖို့ကြည့်ရှုခြင်း၊ကင်မရာများရှိအဆင်ပြေရပ်တန့်၏ထိပ်မှာခလုတ်ကို။ ဒီလျော့နည်းစေဒေတာအသုံးပြုမှုချင်တယ်ဆိုရင်ဝေးဝေးကနေကင်မရာကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်။ နောက်အထက်ဘက်ညာထောင့်ကတိုင်းပြည်ရွေးချယ်ခြင်း၊သင်ရွေးချယ်သောတိုင်းပြည်သင်ကြိုက်တတ်တဲ့ကြည့်ရှုရန်အွန်လိုင်း။ လျှင်ဗမာသည်မဟုတ်ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ပထမဦးဆုံးဘာသာစကား၊သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားမှာအထက်ညာဘက်ထောင့်။ ရှာဖွေပါဘူး ဆိုဒ္လိပ္စာ မခက်ခဲသည်၊အဖြစ်နီးပါး ၈၁ အသုံးပြုသူများအများမှာ။ သို့သော်၊ဒါကြောင့်ပိုပြီးခက်ခဲသည်ရှာဖွေရန်ညွှန်ပြသတင္းမ်ားများနှင့်အမျိုးသားများအပေါ် Chatrandom။ အများစုမှာအမျိုးသားများအပေါ်တူဆိုဒ်များ Shatruletka ရှာအမျိုးသမီးများခုန်ကျော်များလုပ်ဆောင်ပြီးအခြားယောက်ျားတည်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ချက်တင်အင်္ဂါသက်ရောက်စေမည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအခြားလိုသူမ်ား။ သင်ပြောပြရန်မလိုပါအခြားသူများအဘို့အရှာနေသောလူ၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူတိုင်းသည်ပြီးသားသိတယ်။ အဓိကအားသာချက်အသုံးပြုခြင်း၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ချက်တင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ကြီးမားသောလိင်အွန်လိုင်းအသိုင်းအ၊ကျနော်တို့မကြာခဏရှိသည် ၁၅၀၀၀ ကျော်ဧည့်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်း။ ခြင်းရှိမရှိသင်တို့အဘို့အရှာကြသည်အသစ်လိင်မိတ်ဆွေများကသို့မဟုတ်အဘို့အရှာဖွေနေစစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊လိင်ကမ်ချတ်လိမ့်မည်ကျိန်းသေသင့်ရဲ့ပိုမိုလွယ်ကူအလုပ်တခုကို။ ဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ချက်တင်ဒါကြောင့်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်သင်ရွေးချယ်ဖို့အမျိုးသားများနှင့်အတူစကားပြော။ တောင်မှထိုကင်မရာလုံးဝကျပန်းများမှာ၊သင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အခမဲ့စစ်ရွေးချယ်ရာတွင်အတွက်၊ဥပမာအားဖြင့်။ အခြား ကျပန်းချက်တင်ဆိုဒ်များကိုပူဇော်ရခိုင်ဂေးအသိုင်းအဝိုင်း၊နှင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ကြောင်းဗွီဒီယိုအသစ်အသိုင်းအဖြစ်နည်းတူအရေးကိုဖြောင့်။ ကပံ့ပိုးအားဖြင့်ကြီးမြတ်အင်္ဂါရပ်နှင့်ကိရိယာများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်အသိုင်းအဝိုင်း၊ကျွန်တော်တို့ဆွဲဆောင်နိုင်အသုံးပြုသူများအထောင်ပေါင်းများစွာ၏နေ့စဉ်။ အကြီးဆုံးကတော့၊သင်မျှော်လင့်သင့်အပျော်ရွှင်စရာတွေအများကြီး။ နေတယ်ဆိုရင်၊အမျိုးသား၊သို့မဟုတ်တောင်မှပဲစပ်စု၊ဘယ်တော့မှငြီးငွေ့၏သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါ။ အဲဒါကြောင့်လူများစွာကအွန်လိုင်းမှာမဆိုအပ်ပေးတော်မူသောအချိန်သင်အများအားဖြင့်မမြင်ရသောတူညီလူတစ်ဦးနှစ်ကြိမ်။ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များဟာအလွန်ဖော်ရွေအရာအသက်ရှင်သောချက်တင်။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူမိန်းကလေးများဆောင်တတ်၏သဟဇာတ၊၎င်းလင်း၊သဘာဝအသီးအသီးအရိယာတံုး။ မရှိစိုင်းဒီမှာ၊သို့သော်ထိုဆန့်ကျင်တွင်၊သငျသညျအထနွေး။ ဗီဒီယိုချက်တင်အွန်လိုင်းချက်တင်ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူဗီဒီယိုကင္မရာ။ အချက်တင်ကအသုံးပွုဖို့လွယ်ကူပါတယ်နှင့်သင်မပါဘဲ။ ရုံပေါ်တွင်နှိပ်ပါအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်နှင့်အလှည့်တွင်ကင်မရာများ၊နှင့်လူတိုင်းအခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့ချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ ဤစကားပြောဆိုအပေါ် လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူရုရှားမိန်းကလေးများသည်အထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုအဘို့ယောက်ျားတွေ။ မတ်ရုရှားမိန်းကလေးများချစ်ခြင်းမေတ္တာဆောင်ရွက်ရန်၊အွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အတူဥရောပ၊အမေရိကန်၊အရှေ့တိုင်းနှင့်အာရပ်အမျိုးသားများ။ ရုရှားမိန်းကလေးများအခင္ဆံုး၊ရွှင်လန်း၊နှင့်ကျော်ကြားသောအဘို့မိမိတို့အလှအပ။ သူတို့အနိုင်အချစ်၊ဖန်တီးဖို့အတွက်နှစ်သိမ့်မိသားစု၏စောင့်ရှောက်မှုယူအမျိုးသားများအတွက်၊၏စောင့်ရှောက်မှုယူ။ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများသည်တစ်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောလမ်းကိုရှာတွေ့ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်အွန်လိုင်း။ စကားပြောလုံးဝအမည်ဝှက်နှင့်အခမဲ့။ ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ရော၊ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်ချစ်ဘော်၊လိင်နှင့်အခြားအထိခိုက်မခံကြောင်းအရာ။ ဆက်သွယ်ရေးအပေါ်ရင်းနှီးသည့်တစ်ခုတည်းသောပုဂ္ဂလိကအတွက်အခန်းပေါင်း။ ထို့ကြောင့်၊သငျသညျရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သာဝယ်ယူ၊ဒါပေမယ့်လည်းအသွင်ဝတ္ထုနှင့်စစ်မှန်သောသူတွေအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုချက်တင်။ ရွေးချယ်ရာတွင်ဒေသတွင်း၊နိုင်ငံ၊မြို့ဘယ်မှာသင်ချင်မှရှာတွေ့အပေါင်းအဘော်၊အတွေ့အကစားတဲ့စကားပြောနှင့်အတူမိန်းကလေးများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ ကိုယ့်နှိပ်လိုက်ပါအောက်ခြေတွင်နှင့်ချက်တင်ကစားတဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ရွေးချယ်တဲ့အမျိုးသမီးများအတွက်အမျိုးသားများအတွက်၊နှင့်အပြန်အလှန်၊အမျိုးသမီးများ၊အမျိုးသားများအဘို့အချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်သွယ်ရေး။ အသက်ချက်တင်သုံးစွဲသူများသည်ကန့်သတ်မထားဘူး။ လူငယ်လူတွေ့ဆုံရန်၊နှင့်သောသူတို့သည်ကျော်ရှိပါတယ် ၃၀၊၄၀၊၅၀အသက်အနှစ်။. အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များ၊အထူးသဖြင့်ရုရှားမိန်းကလေးလိမ့်မည်ကိုကူညီအကောင်းဆုံးနှင့်ပြည့်စုံသောအဖော်အသက်တာ၌။ သင်ခံစားရလျှင်သင်အထီးကျန်၊နောက်လာဖို့အဆင်ပြေချောမွေ့ကမ္ဘာ၏အွန်လိုင်းချက်တင်။ ဗီဒီယိုချက်တင်-ဖယ်ရှားပစ်ရရန်အထီးကျန်၏၊ကြောင့်လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းမနိုင်။ ဒီနေရာမှာရဲ့အခြားအပိုင်းအစငါ့ဝိညာဉ်၏။ စမတ်နှင့်ပေါင်းကောင်းသောလူဘယ်သူနားထောင်ဖို့၊အကူအညီ၊အကြံဥာဏ်ပေး၊ကြိုက်မှပဲဆက်သွယ်ပြီးအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြောဆိုသည့်အကြောင်းအရာ။.
အားလုံးအချက်အလက်ဆိုက်ပေါ်တွင်အလိုအလျှောက်စုဆောင်းနေဖြင့်အများပြည်သူနှင့်အများပြည်သူရရှိနိုင်သောအချက်အလက်များကိုလူမှုကွန်ယက်ဇြန္လဲ့ေ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးရေပန်းစားလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။ အဆိုဒ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ၊တိကျမှန်ကန်သတင်းအချက်အလက်။ အားလုံးအချက်အလက်ဆိုက်ပေါ်တွင်အလိုအလျှောက်စုဆောင်းနေဖြင့်အများပြည်သူနှင့်အများပြည်သူရရှိနိုင်သောအချက်အလက်များအဇြန္လဲ့ေလူမှုကွန်ယက်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးရေပန်းစားလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။ အဆိုဒ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ၊တိကျမှန်ကန်သတင်းအချက်အလက်။
အတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်ယူ၊ဒါကြောင့်အဆင်ပြေပြေဆက်သွယ်ဖို့အတွက်အပြိုင်အတွက်ပုံမှန်စကားပြောသည်။ နားမလည်ခဲ့ပါဘူး၊ဒါကြောင့်လဲကျနော်ရေးသားခဲ့သည်။ အသစ်တစ်ခုကိုဝက်ဘ်ဆိုက်ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးအသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရုရှားဆယ်ကျော်သက်၊Andrey၊လာခဲ့သည်မမျှော်လင့်ဘဲလူကြိုက်အပေါ်။ တစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ဖြန့်ချိမူရင်းကိုဝန်ဆောင်မှုခွင့်ပြုထားကြောင်း၊မည်သည့်အသုံးပြုသူမှဆက်သွယ်ကနေတဆင့်ဖြင့်ကျပန်းတကျွန်းတနိုင်ငံသား။ မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်၊ဆိုက်လျင်မြန်စွာရရှိခဲ့ကျော်ကြားမှုအတွက်အင်္ဂလိပ်စကားပြောအပိုင်းများ။ ဒီစီမံကိန်းကိုလည်းအာရုံစိုက်မှုကိုဖမ်းမိ၏ဒ်ထဲ၊ရေတွင်းတစ်တွင်း-လူသိများအကျိုးတူအရင်းရှင်သောသူတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရာအိုနှင့်ဖိတ်ဖို့သူ့ကိုကျော်လာ။ ငါနေဆဲပေါ့လျှင်သေချာမဖြစ်သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ဤစီမံကိန်း၊ဒါပေမယ့်ငါသေချာပီးဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီကောင်လေး။ သူကငါ့ကိုသတိပေးနေပါတယ်လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်ငါဖို့အသုံးပြုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်၊"အော်ပြောပါတယ်။ ဆက်သွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကျပန်းတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏ကမ္ဘာအဝှမ်းအဆင်သင့်နေသောအကြောင်းပြောဖို့သင့်ရဲ့ပြဿနာတွေ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်။
Petrozavodsk ဗီဒီယိုချက်တင်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။
အင်တာနက်ကိုအရှည်မည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အချိန်တွင်နိုင်မကြည့်သူတို့၏အသက်တာမပါဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာနက်ပေါ်မှာအများ:ကျနော်တို့ဆက်သွယ်ဖို့၊အမိန့်အစားအစာ၊အဝတ္အထည္မ်ား၊ရွေးချယ်တဲ့ကား၊အိမ်ခြံမြေ၊အပင်ရှာတွေ့ငါတို့ဝိညာဉ်အိမ်ထောင်ဖက်။ လူသားသည်လူမှုဖြစ်ခြင်း၊ထို့ကြောင့်သူသည်အသက်မရှင်နိုင်ပါပါဘဲ။ ယနေ့အချိန်တွင်၊များစွာသောလူလွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်ကျွမ်းရနေ့စဉ်အသက်တာ၌၊ဒါကြောင့်အများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောလူ၊ထိုကဲ့သို့သောတစ်မူထူးခြားသောလမ်းဖြစ်ဆက်သွယ်ရေး၏ချက်တင်ကစားတဲ့မတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊အရာစိတ်ဝင်စားစရာနည်းလမ်းမသာတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှစိုးရိမ်နှင့်၎င်းတို့၏ခံစားချက်၊ဒါပေမယ့်လည်းကူညီရှာဖွေအတွက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်ဆက်ဆံရေး။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့နိုင်ဖြစ်ရိုးရှင်း:မျက်နှာပြင်နှင့်ကီးဘုတ်၊ဒါပေမယ့်လည်းဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်သည့်အခါ၊သင်သိအတိအကျဘာကိုသင့်ရဲ့ Interlocutor နဲ့တူလှပါတယ်။ ဤသည်အလွန်အရေးကြီးသည့်အခါချိန်းတွေ့၊ကြောင့်မှတ်မိမကြာခဏဘယ်လိုသင်အမှားတွေလုပ်တဲ့အခါလူအတင်အခြားလူများရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်သံမှအခြားလူများအပေါ်စက်ဝိုင်းသို့မဟုတ်အဓိပ္ပါယ်။ ဗီဒီယိုစကားပြောဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုသူတစ်-ဖော်ရွေအသုံးျလူအပေါင်းတို့၏အသက်အရွယ်။ ၁၈ အသက်အနှစ်။ အဒေတာဘေ့စပါရှိသည်ကြီးမားသောအရေအတွက်ကိုလစဉ်သူအတွက်အသုံးပြုကြသည်အတွက်နှစ်မျိုးလုံးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု။ သို့သော်၊အများဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့သင်လိုအပ်ရှာဖွေဖို့အတွက်မိတ်ဖက်နှင့်အပေါင်းအဘော်ကိုယ့်ကိုယ်ကို၊သင်တို့အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါသူတွေးမိပါလိမ့်မယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်၊ဤအချိန်။ စကားပြောလိမ့်မည်အများဆုံးစျေးသိပ်အဆင်ပြေလမ်းအတွက်သင်ဆက်သွယ်ဖို့၊နှင့်ဤအခြေခံအကျဆုံးနှင့်အရေးကြီးအားသာချက်။ ကြောင်းမထင်ကြဗီဒီယိုစကားပြောသည်များအတွက်သာရည်ရွယ်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအပေါ်ဝဘ်၊အဆန့်ကျင်တွင်၊လူများစွာမွေးဖွားပေးစေဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ရက္မ်ား၊ဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူအသီးအသီးအခြားအပေါ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာ၊အနုပညာ၊နိုင်ငံရေး၊သဘာဝ၊ချိန်းတွေ့အကြုံအတွက်၊ရှာတွေ့ခရီးသြားမ်ားတူညီသောအကျိုးစီးပွား၊နှင့်တော့။ ဟုတ်ပါတယ်၊အဆိုပါရွေးချယ်မှုကို၏ရင်ခုန်စရာဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးဖယ်ကျဉ်မထားပေ၊တယောက်ရာခိုင်နှုန်း၏သောသူစုံတွဲများ၏ခိုင်ခံ့သောမိသားစု၊ကျွမ်းအင်တာနက်ပေါ်မှာ။
খারাপ জায়গা খুঁজে পেতে একটি লোক থেকে
အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့မပါဘဲဗီဒီယိုမှတ်ပုံတင်ရေး အွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးတစ်ဦး ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ၡမ်ား ဗီဒီယိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အဘယ်သူမျှမအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ချိန်းတွေ့နှင့်အတူဖုန်းနံပါတ် ဘယ်မှာတွေ့တဲ့မိန်းကလေးက လိင်ပျော်စရာဗီဒီယိုအခမဲ့ ဗီဒီယိုအမျိုးသမီးချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်းနှင့်အတူမိန်းကလေးများအခမဲ့အွန်လိုင်း ချက်တင်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့